🥇 ukubalwa kwezimali ezisetshenziswayo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 348
Isistimu Esebenzayo: Windows, Android
Iqembu lezinhlelo: USU software
Inhloso: Ukuzenzakalelayo kwebhizinisi
ukubalwa kwezimali ezisetshenziswayo
Ukunakwa! Ungaba ngabamele ezweni lakho!
Uzokwazi ukuthengisa izinhlelo zethu futhi, uma kunesidingo, ulungise ukuhunyushwa kwezinhlelo.
Sithumele i-imeyili ku info@usu.kz
Ividiyo yokubalwa kwezimali ezisetshenziswayo
Le vidiyo ingabukwa ngezihlokwana ngolimi lwakho.
Landa inguqulo yedemo
Lapho uqala uhlelo, ungakhetha ulimi.
Ukhokha kanye kuphela. Azikho izinkokhelo zanyanga zonke!
Uhlelo lomsebenzisi olulodwa
Isikhathi samahhala sokusekelwa kwezobuchwepheshe
Amahora angeziwe wokusekelwa kwezobuchwepheshe
Oda i-accounting yezindleko zokusetshenziswa
Ukubalwa kwemali okusetshenziswayo akukwazi ukukwenza ngaphandle kwesoftware ezenzakalelayo, kucatshangelwa ubukhulu bomsebenzi nenani lababhalisile, indawo yezinsizakalo ezinikeziwe nokuzilawula. Ukubalwa kwemali yezinsiza kusoseshini wabanikazi bempahla kuyingxenye esemqoka yokuphila komhlali ngamunye, kucatshangelwa ukuhlinzekwa kwezinsiza nyangazonke. “Kungani ngidinga isoftware ye-accounting, ngoba kukhona abasebenzi?” - ungabuza. Isizathu ukuthi ukuphathwa nokubalwa kwemali akwenziwa ngaso sonke isikhathi ngokufanele nangesikhathi lapho kusetshenziswa izindlela zendabuko zokulawula, kucatshangelwa isici somuntu, umthamo womsebenzi namanye ama-nuances ahlobene nomsebenzi. Kungakho umuntu kufanele abheke ezinye izindlela zokwenza inqubo isebenze njengewashi lewashi. Sikhuluma ngezinhlelo ezikhethekile zokubalwa kwezimali zezinsiza ezisetshenziswayo, ezikwazi ukwenza ukusebenza kuphelele! Nsuku zonke, yonke indawo yokuhlala (ifulethi, indlu, isikhungo esizimele noma somphakathi) isebenzisa zonke izinhlobo zezinsiza, ezibalwa ngesisekelo samadivayisi we-metering noma ngaphandle kwazo, ngesisekelo sentela ejwayelekile, ehleliwe. Nyanga zonke, abasebenzi bezinsiza zomphakathi kufanele benze ukubala, ukubala kabusha, ukulawula, ukubalwa kwezimali, ukulungisa, ukuqopha nokulungiselela imibhalo. Kunezinto eziningi abasebenzi okufanele bazenze kangangokuba imvamisa kuba njalo ukuthi basebenze ngokweqile futhi bazizwe benengcindezi. Lokhu akwamukelekile, njengoba abasebenzi kufanele bazizwe bekhululekile lapho befeza imisebenzi yabo. Ngaphandle kwalokho, lokhu kuzothinta ikhwalithi yomsebenzi wabo futhi kube nomthelela omubi endleleni abaxhumana ngayo namakhasimende.
Ngakho-ke, isidingo sohlelo oluzenzakalelayo lokubala izikweletu asisathandabuzwa, uma kubhekwa ukubaluleka, ukusebenza kahle, ikhwalithi nezikhathi zokugcina zomsebenzi. Akukhathalekile kubasebenzisi ukuthi yiluphi uhlelo lwe-accounting lwezikweletu ezisetshenziswayo, into esemqoka ukuthola insizakalo esezingeni eliphakeme. Kumabhizinisi nakubasebenzi, ukubaluleka kokusebenzisa isoftware yekhwalithi esezingeni eliphakeme kuqala, ngoba ngosizo lohlelo, imisebenzi yomsebenzi iba ngeyomshini futhi namahora okusebenza alungiswa, ngokusebenza kwemisebenzi esezingeni eliphakeme. Olunye lwezinhlelo ezinhle kakhulu zokubalwa kwemali zezikweletu ezisetshenziswayo emakethe yi-USU-Soft, eyenza umsebenzi wokusebenza unethezeke, usheshe futhi ube ngcono. Izindleko zalo msebenzi zizokujabulisa futhi ziqiniseke ukuthi awuzukushaya ephaketheni lakho, okuvame ukubonakala lapho uthenga amasistimu afanayo okukhipha izikweletu. Isoftware yokubalwa kwemali yezikweletu ezisetshenziswayo iqeda amaphutha nokudideka ngokubala ngokukhalipha nokuhlukanisa izinto, inikeze amandla okuthola ngokushesha imininingwane edingekayo engagcinwa kuseva iminyaka eminingi ngaphandle kokushintsha izimfanelo zayo nolwazi oluqukethwe.
Ungakhohlwa mayelana nokufika ngesikhathi kwezikweletu namarisidi, izikweletu ezilahlekile kusoseshini wabanikazi bezakhiwo namaphutha kwabakweletwayo, ngoba uhlelo lokubalwa kwemali lwezikweletu luthatha bonke abaphathi, basebenza ngamaphepha, amafomu, izibalo kanye nababhalisile bebonke, ukulawula ukufundwa kwamadivayisi we-metering nokusebenzisa amafomula acacisiwe. Konke kwenziwa ngomshini, kulawulwa zonke izinqubo. Isoftware yokubalwa kwemali yezikweletu ezisetshenziswayo, ngenxa yokusebenza kwizinhlobonhlobo nokusebenza kuyo yonke imikhakha yomsebenzi, iphinde inikeze abasebenzisi ukubalwa kwemali yezinsiza ezinhlanganweni zabanikazi bezakhiwo, ezenziwa ngokushesha nangekhwalithi, ezihlanganiswa namadivayisi nezinhlelo ezahlukahlukene, ezihlinzeka ithuba lokonga imali ekuthengeni izinhlelo ezengeziwe zokubalwa kwezimali.
Futhi, kungenzeka ukonga isikhathi ekugcwaliseni amafomu afanayo. Amafomu, imibiko kanye nemibhalo kulungiselelwa ukuthunyelwa kumayunithi ahlukene ezakhiwo, kufaka phakathi amakomidi entela. Okusetshenziswayo kwendawo yonke kunikeza abanikazi isikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi okulula ukusifunda futhi esingathathi isikhathi esiningi ukusazi. Idizayini ayimi ndawonye. Ungakhetha isitayela osifunayo ngokumane uzame izingqikithi ezihlukile ohlwini. Ukubukwa kwevidiyo emfushane kunikezwa lapha njengesixhumanisi Zonke izilungiselelo zokumiswa ziyashintshwa futhi zilungiswe uqobo kumsebenzisi ngamunye. Ngesikhathi sokubhalisa, abasebenzisi banikezwa ukungena ngemvume ne-password, banikeze amalungelo athile okusetshenziswa, akhonjiswa yizici zokusebenza. Ukufakwa kwedatha okuzenzakalelayo kunciphisa amaphutha noma amaphutha, kanye nokungeniswa okuvela ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamafayela, okukhulula isikhathi sabasebenzi, ukuqinisekisa ukunemba nokusebenziseka kalula. Ikhono lokusebenza ngamafomethi ahlukile futhi lenza lula imisebenzi yenkampani, evame ukusebenza ngokushintshaniswa kwemibhalo yolwazi. Uhlelo lwe-accounting lwezikweletu ezisetshenziswayo likuvumela ukuthi ubheke njalo zonke izinqubo zokukhiqiza, unikeze abaphathi imininingwane edingekayo ngendlela yemibiko kanye namashejuli, kanye nokulandelela ukunyakaza kwezezimali kumalogi ngamanye atholakala ngqo kudeskithophu.
Ukubalwa kwemali yezinsiza ezinhlanganweni zabanikazi bezakhiwo kwenziwa ngokusebenzisa izixazululo zobuchwepheshe besimanje ezidlulisa ukufundwa kunethiwekhi yendawo noma nge-Intanethi. Kusetshenziswa iMisa noma ukuthumela amarisidi nemilayezo uqobo, ngokunikezwa kokufundwa okunembile, abasebenzisi abangakuqinisekisa ngokuzimela kusayithi, ukusetha ukufundwa okutholakalayo nokubukwa ngamanani kanye namafomula. Ngakho-ke, ukuhlangana kanye nokunemba kuzosusa izimo zengqondo ezingezinhle futhi ezingathembi, futhi nomsebenzi wabasebenzi uzoncipha kancane. Uhlelo lwamabhilidi lungenziwa ngokheshi noma ngokudlulisa imali kwi-akhawunti yamanje yenkampani yombuso.
Ukulawulwa kwesikhathi somsebenzi
Ukuhweba nendawo yokugcina impahla
Uhlelo lwesitolo sezimbali
Uhlelo lwendawo yokugcina impahla
Uhlelo lokushintshaniswa kwemali
Uhlelo lwendawo yokuthenga impahla
Uhlelo lwezinhlangano ezincane
Uhlelo lokuthola amazinyo
Uhlelo lwesalon yokuzilungisa
Uhlelo lwesikole sokudansa
Uhlelo lwesikhungo sokuzijabulisa
Uhlelo lwenkonzo yemoto
Uhlelo lwezinto ezibonakalayo
Uhlelo lokuhlanza owomile
Uhlelo lwendlu yokuphrinta
Sinezinhlelo ezingaphezu kwekhulu. Akuzona zonke izinhlelo ezihunyushiwe. Lapha ungabona uhlu oluphelele lwesoftware
ukubalwa kwezinkampani okusetshenziswa
accounting ezinkampanini zokuphatha izindlu
ukubalwa kwemali kwabahlinzeki
accounting kwebhizinisi losizo
ukubalwa kwenhlangano yokusetshenziswa
ukubalwa komsele wamanzi
accounting ezinsizakalweni zomphakathi
ukubalwa kwezimali zomphakathi
ukubalwa kwamandla kagesi
accounting wokususwa kukadoti
ukubalwa kwamadivayisi we-metering ngamunye
accounting of ukufundwa kwemitha
ukubalwa kwezinkokhelo zezinsizakalo zomphakathi
ukubalwa kwezimali zokubala Umbuso
ukubalwa kwezinsizakalo zokuhlinzekwa kwamanzi
ukukhokhwa kwezimali zefulethi
ukukhokhwa kwezimali zezindleko zesisetshenziswa
uhlelo lokubala lwezinsizakalo zomphakathi
ukutholwa ngamadivayisi we-metering
ukutholwa kokuphakelwa kwamanzi
ukuthathwa kwemisebenzi yezindlu neyomphakathi
ukuqoqwa kokukhokha ngokushisa
ukuthathwa kokukhokha kwamanzi
ukwengezwa kwezinhlawulo zezinsizakusebenza
ukuthathwa kwemali ekhokhelwa ukusetshenziswa
inkokhelo etholakalayo yezinsiza
ukuphathwa kwendlu efulethini
i-metering kagesi ezenzakalelayo
ezenzakalelayo ze-accounting zezinsizakalo
okuzenzakalelayo komsele wamanzi
Ukubalwa kwezinsizakalo zomphakathi
Ukubalwa kwenhlawulo yezinkokhelo zomphakathi
Ukubalwa kwenhlawulo zezinsizakusebenza
Ukubalwa kwezinsizakalo zezindlu nezomphakathi
Ukubalwa kwezinkokhelo zokusetshenziswa
Ukubanda kwamanzi okubandayo
Amanzi abandayo amanzi
Uhlelo lokuhlangana kukagesi
Uhlelo lokubala lokushisa
Ama-Heat supply accounting
Metering amanzi ashisayo
Uhlelo Lwezindlu nohlelo lomphakathi
Ukuphathwa kwebhizinisi lokusiza
Ukubalwa kwezinkokhelo ngezinsizakalo zomphakathi
Uhlelo lokukhokha lwezinsizakalo zomphakathi
Ukukhokha kanye nokuqongelwa kwemisebenzi yomphakathi
Ukubalwa kwemali ekhokhelwayo yezinsizakalo zomphakathi
Ukuphrinta irisidi ngebhakhodi
Amarisidi wokuphrinta wokukhokha
Uhlelo lokubalwa kwezinsiza kusebenza
Uhlelo lokubala imali ekhokhelwa ukusetshenziswa
Uhlelo lokubala imali etholwayo
Uhlelo lokubala ngamadivayisi we-metering
Uhlelo lokuthola izinsiza zomphakathi
Uhlelo lwenkampani yokusebenza
Uhlelo lokubala irisidi
Uhlelo lokubalwa kwezinsizakalo zomphakathi
Uhlelo lokubalwa kwezinkokhelo zokusetshenziswa
Uhlelo lokungcola komphakathi
Uhlelo lwenkampani yokuxhumana emnyango
Uhlelo lokugcwalisa amaresidi
Uhlelo lwamarisidi okwakhiwa
Uhlelo lokuqoqwa kwemali kadoti
Uhlelo lwezinkampani zokuphatha izindlu
Uhlelo lomhlinzeki we-inthanethi
Uhlelo lamadivayisi we-metering
Uhlelo lokukhokhela izinto ezisetshenziswayo
Uhlelo lwabantu lokubala
Uhlelo lokuhlinzekwa kwamandla
Uhlelo lwamarisidi okuphrinta
Uhlelo lokusetshenziswa komphakathi
Uhlelo lomhlinzeki wethebula lethelevishini
Uhlelo lwenkampani igesi
Uhlelo lwebhizinisi losizo
Uhlelo lwenhlangano eyenzelwe umsebenzi
Uhlelo lomsele wamanzi
Uhlelo lokusetshenziswa okwenzekile
Uhlelo lokukhokha okusetshenziswayo
Uhlelo lwamarisidi asetshenziswayo
Uhlelo lokuhlanganisa amanzi
Uhlelo ukukhokhela indlu
Ukuphathwa kwendlu yokuhlala
Idokhumenti elilodwa lokukhokha lezinto ezisetshenziswayo
Uhlelo ezisetshenzisweni zomphakathi
Uhlelo lwezinsizakalo zomphakathi
Uhlelo oluhlanganisiwe lokukhokha kokusetshenziswa
Izinsiza wokubala wokubala
Umsebenzi wokubala imali
Ukusetshenziswa kokusetshenziswa kwamafulethi
Uhlelo lwamanzi wamanzi
Ukubalwa kwezimali zamanzi
Ukuhlinzekwa kwamanzi nge-automation
Oda isoftware entsha